HORDHAC : Arsenal vs BATE Borisov Gunners oo halis ugu jirta in ay ka haraan tartanka - Latest News Updates
Arsenal ayaa caawa garoonkeeda ku marti qaadi doonta kooxda BATE Borisov oo guul daro layaab leh ay kala kulantay lugtii koowaad ee tartanka Europe League waregiisa 32-da .
Arsenal waxaa ka maqnaan doona mid kamida xidigeheeda ugu muhiimsan halka BATE Borisov aysan qabin wax cabsi ah ka hor kulanka .
Alexandre Lacazette ayaa ka ganaaxan kooxda Arsenal kaddib markii uu qaataya kaar cas kulankii lugtii kooowaad oo ay la kowsadeen guul daro xanuun badan .
Unai Emery ayaa xaqiijiyey in safka kooxda ay ku soo laabteen xidigaha kala ah Aaron Ramsey iyo Sokratis ku was oo diyaar u ah in ay ka wajahaan kooxda BATE Borisov.
Ainsley Maitland-Niles ayaa seegay taba barka lowgu diyaar garoobayey kulanka caawa waxaana waxaana macquul ah in uu seego kulanka .
Aleksandr Hleb ayaa ka badbaaday in uu qaato caalamad jaale ah , hadii uu qaadan lahaana waxa uu seegi lahaa kulanka lugta labaad ee caawa .
lama filiyo in wax isbadal ah lagu sameeyo safkii kulankii hore 1-0 kaga soo adkaaday kooxda Arsenal waxa ayna u badantahay in markale ay ciyaartoydaas ku soo bilowdaan .
Kulanka : Arsenal vs BATE Borisov (Europe league )
Goobta : Emarates stadium
Goorta :8:00 oo habeenimo
Garsoorka :Alberto Undiano Mallenco (ESP)
Arsenal ayaa marti gilin doonta kooxda BATE Borisov markoodii labaad kualnkii ugu horeyey ee ka dhacay halkan ayaa ku soo idlaaday 6-0 waxa ayna aheyd sanadkii hore kulamda wareega guruubyada .
Iyada oo lagu darayo kulamada is reeb reebka kooxda ka dhisan Belarus ayaa qasaartay sedex kamida afartii kulan ee ay wajahday kooxaha England tartanka Europe League , gushii ugu dambeysana wax ay ka gaartay kooxda Everton kulan ka dhacay garooka BATE .
Arsenal marna ma dhicin in ay dhalin weyso gool kulamda labada is arag tartamada yurub tan iyo sandkii 1995 markaas oo ay la ciyaartay Millan ciyaar ka tirsaneed European suprcup final , waxaa dhacday in bareejo lagu hishiiyo lugtii koowaad oo ka dhacday garoonka milab balse lugtii dambe Arsenal ayaa lagu qaarijiyey 2-0 garoonkooda .
BATE Borisov ayaa badineysay sedexdii kulan ee ugu dambeyey ee ay ka ciyaarto taratnka Europe League , balse labo mar oo kaliya ayey badiyeen 16-kii kukan ee tartanka 7-bareejo iyo 9 -qasaro iyada oo lagu daraayo kulamda is reeb reebka .